Ho fanampin'ny vondron'olona haran-dranomasina salama sy rakotry ny haran-dranomasina, ny famerenana amin'ny laoniny ny fototry ny vatohara dia mety ho fandraisana andraikitra manan-danja ihany koa rehefa simba, simba, na tsy mety amin'ny fametrahana olitra ny vatohara. Ohatra, mety ilaina ny fandraisana anjara fanampiny amin'ny substrate any amin'ny faritra izay nanimba ny rafitry ny haran-dranomasina ny jono dinamita alohan'ny hahombiazan'ny teknika famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina toy ny fambolena haran-dranomasina sy ny fambolena. Ny haran-dranomasina izay misy macroalgae lasa manjaka amin'ny haran-dranomasina dia mety mila fandraisana andraikitra amin'ny fanatsarana ny substrate mba hahatonga ny substrate mety amin'ny fambolena haran-dranomasina sy ny fomba fandraisana mpiasa voajanahary.
Faritra haran-dranomasina mety amin'ny asa fanarenana ny haran-dranomasina. Sary © Reef Explorer (Fiji) Ltd.
Fanamafisana ny korontam-bato
Ny fandrahonana avy amin'ny olombelona sy ny toetrandro (ohatra, fanjonoana dinamita, fanitsakitsahana, rivo-doza tropikaly) dia mitarika amin'ny fiovan'ny haran-dranomasina velona ho tanimbary midadasika amin'ny taham-pahavitrihana mihoatra ny fahafahan'ny ekôsisteman'ny haran-dranomasina hiverina ho azy. Ny fanamafisana ny fako dia mety hahasoa amin'ny ambaratonga kely any amin'ny toerana lafo vidy na manaraka ny fanorenan'ny sambo izay miteraka faritra midadasika amin'ny korontam-bato tsy mitambatra amin'ny rafitry ny haran-dranomasina efa voarindra tsara.
Mbola eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampivelarana ny fandraisan'anjaran'ny maro amin'ny fanamboarana ireo korontam-bato tsy mivondrona na tsy marin-toerana, ary zara raha misy ny antontan-taratasy momba ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny fomba fanao ankehitriny. Na izany aza, ny sasany amin'ireo teknika fanamafisana ny korontam-bato ankehitriny dia ahitana:
harato harato mba hanamafisana ny korontam-bato
Vato antontam-bato hanamafisana ny korontam-bato
Rafitra artifisialy kely (oh: kintan'ny haran-dranomasina MARSS, baolina haran-dranomasina)
Ny kitapo haran-dranomasina dia ampiasaina hanangonana korontam-bato amin'ny haran-dranomasina simba any Aostralia. Sary © Tom Baldock.
Ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia nampiasa rafitra novolavolaina mba hanorina indray na hanamafisana ny rafitry ny haran-dranomasina taorian'ny fahasimbana lehibe nateraky ny fanambanin'ny sambo, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, na ny fanjonoana tamin'ny fipoahana. Ireo tetikasa ireo matetika dia nampiasa fitaovana nataon'olombelona (ohatra, vatosokay, antontam-bato, simenitra voavolavola, vy, hazo, ary kodiarana) izay tsy nahavita naka vato harana tamin'ny rafitra. Mampiasa akora voajanahary bebe kokoa ny tetikasa fanampin'ny vatohara maoderina ankehitriny ary mikatsaka ny hanatsara ny fahasalamana ara-tontolo iainana sy ny serivisy ho an'ny olona, ​​toy ny fiarovana ny morontsiraka. Any amin'ny faritra sasany, mety ilaina ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny trondro.
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-tari-dalana momba ny fitantanana sy ny famerenana amin'ny laoniny ho fanatsarana ny fiarovana ny sisintany: toro-hevitra ho an'ny fampiharana maneran-tany miorina amin'ny lesona naterina tany Meksikamanokatra fisie PDF nataon'i Zepeda et al. 2018 dia loharanom-pahalalana manan-danja manome famerenana ny anjara asan'ny haran-dranomasina amin'ny fiarovana ny morontsiraka ary manome tolo-kevitra maromaro hanombanana ny fotoana, ny toerana ary ny fomba hampiharana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ho an'ny fampihenana ny risika, anisan'izany ireo karazana rafitra sy fomba fanaraha-maso ny vatohara voajanahary sy artifisialy ho an'ny serivisy fanalefahana ny onja.
Ny singa fototra telo amin'ny famolavolana dia tokony hodinihina amin'ny tetikasa fanampiny substrate:
Fametrahana eo amin'ny vatohara
Mihamitombo hatrany ny fiheverana ny akora voajanahary satria afaka mamela sy manafaingana ny fanjanahantany voajanahary ny zavamananaina amin'ny vatohara amin'ny rafitra artifisialy. Ny famantarana simika voajanahary dia manampy amin'ny fanjanahan-tany amin'ny faritra iray ary ny simika synthetic na misy poizina dia afaka manakana ny fanjanahantany. Ny anton-javatra manan-danja hafa amin'ny fanjanahantany dia ny hamafin'ny tany sy ny fahamarinan'ny rafitra.
Ny haran-dranomasina voajanahary dia manana endrika isan-karazany sy morphologie izay mamorona endrika sy habaka sarotra. Ireo morphologie ireo dia sady mampitombo ny hamafin'ny haran-dranomasina, mampitombo ny fahafahan'ny rafitra iray manakorontana ny angovon'ny onjam-peo, ary misarika ny zavamananaina ao anaty haran-dranomasina mba hipetraka sy hampiasa rafitra ho toeram-ponenana. Ny rafitra dia tokony hamboarina miaraka amin'ny faritra misy lavaka, lavaka, na endrika sarotra hafa.
Ny fametrahana araka ny tokony ho izy ireo rafitra eo amin'ny fanambanin'ny ranomasina dia zava-dehibe amin'ny fiantraikany amin'ny onja sy ny lamina ankehitriny izay mety hisy fiantraikany amin'ny morontsiraka. Ny fametrahana ny rafitra dia tokony hiteraka fahasimbana faran'izay kely amin'ny tontolo voajanahary, hialana amin'ny faritra misy ahitra, vato harana ary gorgonian. Toy izany koa, tsy tokony hapetraka any amin'ny toerana mety hampidi-doza ho an'ny sambo sy sambo izy ireo.
Firafitra artifisialy nataon'ny fikambanana 'rrreefs' hanatsarana ny fitrandrahana vato harana voajanahary, Kolombia. Sary © Phanor Montoya-Maya/Corales de Paz
Mety hampidi-doza ny tetikasa misy rafitra mafy satria mety hiongana na rava ny rafitra tsy voavolavola. Ny tetikasa fanampiny substrate dia tokony hikatsaka ny hiara-hiasa akaiky amin'ny sampan-draharaham-panjakana eo an-toerana mba hahazoana fahazoan-dàlana sy ny fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana ary ny matihanina toy ny injeniera amorontsiraka mba hanampy amin'ny fizotry ny famolavolana, ny famolavolana ary ny drafitra alohan'ny fametrahana rafitra artifisialy. ref
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Lesona 5: Famerenana amin'ny laoniny ny rafitry ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiniho ny lesona 5
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana ho an'ny fitantanana ny haran-dranomasina sy ny famerenana amin'ny laoniny mba hanatsarana ny fiarovana ny morontsiraka: Soso-kevitra ho an'ny fampiharana maneran-tany mifototra amin'ny lesona nianarana avy any Mexicomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fanamafisana ny substrate sy ny rafitra kely amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara: Toetran'ny fahalalana, ary ny fiheverana ny fitantanana sy ny fampiharana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tombony, ny vidiny ary ny fahombiazan'ny fiarovana ny morontsiraka voajanahary sy voajanaharymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fahombiazan'ny haran-dranomasina ho an'ny fihenan-tsakafon'ny loza voajanaharymanokatra fisie PDF